ဘယ်မှာငါအသက်တာ၌က USB Hub ကိုသုံးနိုင်သည်? | | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
စက်တင်ဘာလ 7, 2019 အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေး အီလက်ထရောနစ်, အသက်, ထုတ်ကုန်များ, နည်းပညာ 0
အဆိုပါ USB ကအချက်အချာအများအပြားသို့ကို USB interface ကိုချဲ့ထွင်တဲ့သေးငယ်တဲ့ကိရိယာ USB ကအချက်အချာ interfaces. it is powered usb hub fast charging port power adapter data hub with usb for macbook.
USB မှတ် Hub အင်္ဂါရပ်များ >>>
USB မှတ် Hub အချက်အချာထိုကဲ့သို့သောမိုဘိုင်း hard disk ကိုအဖြစ်ကို USB device များအတွက်သုံးနိုငျ, USB flash drive ကို, ကတ်ကိုစာဖတ်သူကို, မိုဘိုင်းဖုန်း, ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာ, high resolution ကတော့ကင်မရာ, ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုကင်မရာနှင့် Multi-ရုပ်သံလိုင်းအသံဖိုင်. ဒါဟာအမျိုးမျိုးသောကို USB မြန်နှုန်းမြင့်ကိရိယာများကိုတစ်ပြိုင်နက်ချိတ်ဆက်မှုကိုထောကျပံ့. , တည်ငြိမ်ဂီယာ.
USB မှတ် Hub စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးသွားဘို့စုံလင်သည်နှင့်နေ့စဉ် use.Can TV ပေါ်မှာရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့နဲ့ချိတ်ဆက်သို့မဟုတ် အဆိုပါအားသွင်းဝေမျှ သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုများနှင့်ရန်မလိုအပ်အတွက် port ယာဉ်မောင်း plug ကို install နှင့်ချဲ့ထွင်ရန်လွယ်ကူသော play.
USB မှတ် Hub ကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်ကွိုတငျကာကှယျမှုမြားဖြစ်ပါသည် >>>
USB မှတ် Hub ကျွန်တော်တို့ကိုအဆင်ပြေယူ,တိုးမြှင့်ကွန်ပျူတာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်,ဒါပေမယ့်သင်ကသုံးစွဲဖို့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုသိကြပါ?
ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့,ကျနော်တို့က USB Hub ရသည့်အခါကျွန်တော်ချက်ချင်း devices တွေကိုအများကြီးမချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ် ,such as Mouse ,ဖုန်းကို,ပုံနှိပ်စက်, charger, ဖုန်းလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်အားသွင်းမယ့်အတော်လေးကြီးမားတဲ့လက်ရှိလိုအပ်သောကြောင့်၎င်းသည်ပေါက်အနီးအရမ်းပူထဲမှာရရှိလာတဲ့ပါလိမ့်မယ်,သူတို့အတူတကွအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာတစ်ဦးထက်ပို hours.Some devices များအလုပ်မလုပ်မည်မဟုတ်.
ထိုကွောငျ့, ကျနော်တို့ကအချက်အချာများ၏မကြာခဏအသုံးပြုခြင်းကိုအာရုံစိုက်သင့်တယ်, အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများအားစောငျ့ရှောကျ. တစ်မူမမှန်လည်းမရှိဆိုပါက, ကွန်နက်ရှင်ကိုပယ်ဖြတ်လ.
တစ်ဦးက USB ကအချက်အချာတကယ်ပေါ်မှာအပိုကို USB port များနှင့်အတူတစ်ဦး gizmo ထက်ပိုပြီးအချည်းနှီးဖြစ်၏. သင်သည်သင်၏ laptop ကိုရဲ့ USB port ကိုစအချက်အချာ plug. ထိုအခါသင်ကအချက်အချာသို့နှစ်ခုမှရှစ်လေးလုံးမှကို USB devices များအနေဖြင့်ဘယ်နေရာမှာမဆို plug နိုင်ပါတယ်.
ဒါဟာလက်တွေ့ကျတဲ့မထင်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ Laptop ကိုဖွင့်ဖို့ရှိသည်နိုင်ပါတယ် 127 မဆိုပေးထားသောအချိန်မှာတွဲကို USB devices များ. ဟုတ်ကဲ့, အားလုံးတပြိုင်နက်. သောက USB port ကိုရဲ့ချဲ့ထွင်ရန်သော့တစ်ဦးရဲ့.
တချို့ကပစ္စည်းတွေအချက်အချာကနေ run မရနိုငျ, ထိုကဲ့သို့သောအခြို့သောမြန်နှုန်းမြင့် hard drive တွေအဖြစ်. ထိုကိစ္စတွင်, device ကိုကွန်ပျူတာ၏ USB port ကိုသို့တိုက်ရိုက်ပလပ်ရမည်ဖြစ်သည်. ဖဲ့ခြွေမနေပါနဲ့: တစ်ဦးကသတိပေးသတင်းစကားကိုတက်လာခြင်းနှင့်ထိုသို့သောအမှုကိုအဖြစ်ပျက်အခါသင်ဘာလုပ်ညွှန်ကြားထား.
အချက်အချာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်: စွမ်းအင်သုံးနှင့် unpowered. ပါဝါဗဟိုချက်ထဲမှာပလပ်ဒါမှမဟုတ်ကွန်ပျူတာကနေသူ့ရဲ့အာဏာကိုရယူထားခြင်းရမည်ဖြစ်သည်. Powered အချက်အချာအချို့ကို USB devices တွေကိုပိုပြီးအာဏာကိုထောက်ပံ့နိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောများမှာ.
ဆန်းစစ်ခြင်း WHDI HD TV သို့ mainboard ကြိုးမဲ့ဗီဒီယိုက modem Box ကို
WIFI ကြိုးမဲ့နည်းပညာဘဝနှင့်အတူပေါင်းစပ်, စီးပွားရေးလုပ်ငန်း, လေ့လာမှုများ
USB မှတ် Hub
Broadcom BCM4360 BCM94360CD BCM94360CS WIFI ကြိုးမဲ့ WLAN ဘလူးတုသ် Card ကိုယာဉ်မောင်းများနှင့် Software များဒေါင်းလုပ်
processor ​​ကို မိုဘိုင်းဖုန်း ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု နည်းပညာ device ကိုမော်ဒယ် HD Graphics စီပီယူ OS ကို-STORE စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် ပရိုဆက်ဆာ Nokia က HTC က စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု Intel က Samsung က ဥပဒေရေးရာအနက် Technology_Internet 64-နည်းနည်းက Windows Software များ
64-နည်းနည်းက Windows ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် Nokia က ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု processor ​​ကို မိုဘိုင်းဖုန်း စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ Qualcomm မှ ပရိုဆက်ဆာ Intel က Server ကို HTC က စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု OS ကို-STORE Sony Ericsson က Samsung က Software များ စီပီယူ Intel က HD Graphics device ကိုမော်ဒယ် နည်းပညာ Technology_Internet ဥပဒေရေးရာအနက် စမတ်ဖုန်းများ Samsung ရဲ့ Galaxy